बैङ्कहरुको नयाँ ब्याजदरः कसको कति ? - KhabarKhurak
> बैङ्कहरुको नयाँ ब्याजदरः कसको कति ?
बैङ्कहरुको नयाँ ब्याजदरः कसको कति ?
१ पुष २०७७, बुधबार ०८:१४
काठमाडौं, १ पुस । चालू आर्थिक वर्ष २०७७र७८ को दोस्रो त्रैमास सुरु भएसँगै विभिन्न वाणिज्य बैङ्क, विकास बैङ्क र वित्तीय संस्थाले नयाँ ब्याज दर तय गरेका छन् । बैङ्कहरूले पुस १ देखि लागू हुनेगरी नयाँ ब्याज दर तय गरेका हुन् ।
बैङ्कले सार्वजनिक गरेका तीनदेखि १० वर्षसम्मका कर्जा योजनाका लागि १०.३२ प्रतिशतदेखि १३.५७ प्रतिसम्मसम्मको ब्याज दर तोकेको छ । ती कर्जामा बेस रेट प्लस दुईदेखि बेस रेट प्लस ५ प्रतिशतसम्म पर्नेछ ।नेपाल एसबीआई बैङ्कले अमेरिकी डलरसहित २७ प्रकारका बचत योजनामा १ देखि ३ प्रतिशतसम्मको ब्याज दर तोकेको छ । त्यस्तै मुद्दती निक्षेपमा व्यक्तिगततर्फ ३ देखि ६.५ प्रतिशत र संस्थागत र विदेशी नियोगतर्फको ४ देखि ६ प्रतिशतसम्मको ब्याज दर तय गरेको छ । लगानीतर्फ बैङ्कले १२.५ प्रतिशतदेखि १४.५ प्रतिशतसम्मको ब्याज तय गरेको छ ।
माछापुच्छ«े बैङ्कले साधारण बचतमा २.५ देखि ४.५ प्रतिशतसम्मको ब्याज दर तोकेको छ । त्यस्तै मुद्दतीमा ७.२५ देखि ८.५० प्रतिशतसम्मको ब्याज दर तोकेको छ । बैङ्कले कर्जाको ब्याज दर भने सार्वजनिक गरेको छैन । मेगा बैङ्कले साधारणतर्फ २.५ देखि ४.५ प्रतिशतसम्मको ब्याज दर तोकेको छ । त्यस्तै मुद्दतीतर्फ ६.५ देखि ७.५ प्रतिशतसम्मको ब्याज दर तोकेको आजको गोरखापत्र दैनिकमा खवर छ ।
टाटा मोटर्सद्वारा युवालक्षित स्वावलम्बी अभियान
राजस्व छली गरेको आरोपमा सुलभ ट्रेडका प्रमुख विरुद्ध मुद्दा दायर
भारतद्वारा पाम आयलमा प्रतिबन्ध : पर्सा, बारामा रहेका ९० प्रतिशत तेल उद्योग धराशायी
दाङमा जनता आवास कार्यक्रम: २६७ घर निर्माण हुने